သင်ဟာ လူချစ်လူခင်ပေါသူ တစ်ယောကဖြစ်လာဖို့ ပျိုးထောင်ရမယ့် အလေ့အကျင့် (၅) ခု – Shwe Naung
သင်ဟာ လူချစ်လူခင်ပေါသူ တစ်ယောကဖြစ်လာဖို့ ပျိုးထောင်ရမယ့် အလေ့အကျင့် (၅) ခု
၁ – မပြောဘူး?
သိပေမဲ့ အတင်း ဝင်မပြောတ တ်တဲ့ အကျင့်ကို မွေးပါ။ အရာရာငါသိတ် ငါတတ် လုပ်သူကို ဘယ်သူမှ သဘောမကျပါဘူး။ မသိဘဲ ဝင်ပြောတဲ့အကျင့် ကိုတော့ ဖျောက်ပစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
၂ – မငြီးငြူဘူး?
အမြဲတမ်း ငြီးငြူနေသူကို ဘယ်သူမှ သဘော မကျပါဘူး။ တော်ရုံနဲ့ မငြီးငြူတတ်တဲ့ အကျင့်ကိုလည်း ပျိုးထောင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၃ – စိတ်ရှည်?
စိတ်မရှည် တတ် တာကြောင့် သင့်ကို မိတ်ေ ဆွတွေက ပေါင်းသင်းရမှာ လန့်တတ် ပါတယ်။ စိတ်ရှည်တတ်အောင်လည်း လေ့ကျင့်ထားသင့်ပါတယ်။
၄ – ချီးကျူးတတ်??
တစ်ဖက်လူ ကို ချီးကျူးဖို့ လူတွေက ဝန်လေး တတ်ကြပါတယ်။ ဒီလို ဝန်လေးမှုကို ဖျောက်ပါ။ တကယ်တော် တဲ့လူကို အရှိအတိုင်း ချီးကျူးတတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ သူ့ကို အသိအမှ တ်ပြုတာကြောင့် သင့်ကိုလည်း ပြန်အ သိအမှတ်ပြုမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၅ – မစပ္စုဘူး?
ကိုယ့်ကို မပြော တဲ့ကိစ္စကို မစပ်စုတတ် တဲ့အကျင့်က အလွန်ကော င်းပါတယ်။ ကိုယ့်ကို မခေါ်တဲ့ စကားဝိုင်းကိုလည်း ဝင်မပါပါနဲ့။ ဒီလိုအကျင့်ကြောင့် သင်ဟာ လေးနက် သူ၊ ကိုယ်ဘာကိုယ် အေးဆေးနေတ တ်သူအဖြစ် လူတွေက လေးစားမှုနဲ့ ခင်မင် ပါလိမ့်မယ်။
၁ – မေျပာဘူး?
သိေပမဲ့ အတင္း ဝင္မေျပာတ တ္တဲ့ အက်င့္ကို ေမြးပါ။ အရာရာငါသိတ္ ငါတတ္ လုပ္သူကို ဘယ္သူမွ သေဘာမက်ပါဘူး။ မသိဘဲ ဝင္ေျပာတဲ့အက်င့္ ကိုေတာ့ ေဖ်ာက္ပစ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
၂ – မၿငီးျငဴဘူး?
အၿမဲတမ္း ၿငီးျငဴေနသူကို ဘယ္သူမွ သေဘာ မက်ပါဘူး။ ေတာ္႐ုံနဲ႕ မၿငီးျငဴတတ္တဲ့ အက်င့္ကိုလည္း ပ်ိဳးေထာင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
၃ – စိတ္ရွည္?
စိတ္မရွည္ တတ္ တာေၾကာင့္ သင့္ကို မိတ္ေ ဆြေတြက ေပါင္းသင္းရမွာ လန႔္တတ္ ပါတယ္။ စိတ္ရွည္တတ္ေအာင္လည္း ေလ့က်င့္ထားသင့္ပါတယ္။
၄ – ခ်ီးက်ဴးတတ္??
တစ္ဖက္လူ ကို ခ်ီးက်ဴးဖို႔ လူေတြက ဝန္ေလး တတ္ၾကပါတယ္။ ဒီလို ဝန္ေလးမႈကို ေဖ်ာက္ပါ။ တကယ္ေတာ္ တဲ့လူကို အရွိအတိုင္း ခ်ီးက်ဴးတတ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ သူ႕ကို အသိအမွ တ္ျပဳတာေၾကာင့္ သင့္ကိုလည္း ျပန္အ သိအမွတ္ျပဳမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
၅ – မစပၥဳဘူး?
ကိုယ့္ကို မေျပာ တဲ့ကိစၥကို မစပ္စုတတ္ တဲ့အက်င့္က အလြန္ေကာ င္းပါတယ္။ ကိုယ့္ကို မေခၚတဲ့ စကားဝိုင္းကိုလည္း ဝင္မပါပါနဲ႕။ ဒီလိုအက်င့္ေၾကာင့္ သင္ဟာ ေလးနက္ သူ၊ ကိုယ္ဘာကိုယ္ ေအးေဆးေနတ တ္သူအျဖစ္ လူေတြက ေလးစားမႈနဲ႕ ခင္မင္ ပါလိမ့္မယ္။
ယနေ့ အကြိုက်ဆုံး ဥပမာ….